महल बिल्डर द्वितीय |
महल बिल्डर द्वितीय
अब Rabcat आफ्नो कहिल्यै रोमाञ्चक महल बनाउने स्लट गर्न sequel अनावरण छ, aptly शीर्षक महल बिल्डर एक स्लट संग 2. यो खेल आफ्नो पूर्ववर्ती को कि एक उन्नयन हुन भने, र छ, अझ बढी, आफ्नो भुक्तानी बढाउने सुविधाहरू. तिमी अगाडी पढ्न र यो स्लट बारेमा थप सिक्न सक्छौं.
निःशुल्क बोनस स्लट मिसिन मा थप भवन किला सिकेर
क्यासल बिल्डर संग2तपाईँ सँग छ3पङ्क्तिहरू,5रील र 15 स्थिर paylines. तपाईंले यो दुई स्तर प्राप्त निःशुल्क बोनस स्लट मिसिन. पहिलो स्तर तपाईंले तीन मुख्य वर्ण बीच छनौट समावेश. यी वर्ण पनि खेल को मूल संस्करण मा प्रमुख थिए.
सुरुमा, तपाईं दुई वर्ण को एक चयन गर्न आशा गरिन्छ, अर्थात् शमू र Mandy. एक पटक पहिलो स्तर पूरा, तेस्रो व्यक्तिगत प्रकट गरिएको छ. पहिलो स्तर मा, तपाईं पनि सुरु गर्न एक स्थान छनौट गर्न आवश्यक हुनेछ. तपाईं कहाँ बाट सुरु गर्ने निर्णय लागि नक्सा प्रस्तुत गरिनेछ.
यो स्लट एक ईटा समावेश केही कम मूल्य प्रतीक छ, ग्रेनाइट, स्लेट र पत्थर. उच्च-मूल्य प्रतीक एक सुन पट्टी समावेश, मुकुट र एक सन्दुक. जो तपाईं आफ्नो महल निर्माण गति तपाईं मिल्ने प्रतीक संग भूमि भनेर विजेता Combos संख्या निर्भर हुनेछ.
जंगली अनि स्क्याटर प्रतिक विशाल शासन
क्यासल बिल्डर मा2जंगली प्रतीक त शमू वा Mandy प्रतिनिधित्व छ. यो खेल को सुरुदेखि चयन गरेको व्यक्तिगत निर्भर हुनेछ. Whichever जंगली तपाईं चयन प्रतिमा, यो अवतरण विजेता संयोजन को आफ्नो संभावना बढाउने अन्य सबै प्रतीक विकल्प हुनेछ.
को रील मा मात्र प्रतीक कि wilds प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, को स्क्याटर प्रतिमा छ. को स्क्याटर प्रतिमा एक गुलाबी फ्री स्पिन प्रतिमा रूपमा यहाँ चित्रण गरिएको छ. तपाईंले यो स्लट मा आफ्नो महल निर्माण स्क्रिनको बाँया पक्षमा देखिन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ. को रील, अर्कोतर्फ, पनि स्क्रिनको सही पक्षमा देख्न सकिन्छ.
यो नि: शुल्क बोनस स्लट मिसिन संग, तपाईं भर्न हुनेछ 8 आफ्नो खेल स्क्रीन तल्लो बायाँ कुनामा मा देख्न सकिन्छ कि ग्रिड. तपाईं Combos विजेता भूमि जब यो गरेको छ. को ग्रिड अप भरिएको भइरहेका छन् रूपमा, आफ्नो महल निर्माण पनि एक उन्नत चरण मा हुनेछ. संग 8 ग्रिड भरिएको, एक व्यक्ति को लागि आफ्नो महल निर्माण त पूरा.
तपाईं त फरक साइटमा लगिनेछ, तपाईं आफ्नो चयन वर्ण लागि अझै अर्को महल निर्माण सुरु हुनेछ. एक पटक एक व्यक्ति को लागि सबै सम्भव महल निर्माण गरिएको छ, तपाईं हुनेछ